ပန်ဒိုရာ: မြေအုတ်များ ကျောက်အုတ်များ နှင့် သွေးစက်နီနီ
ဒီတခါ ကျွန်တော် နားလည်အောင် ဖတ်ရမည့် စာအုပ် တစ်အုပ် သည် သမီးပင် ဖြစ်လေသည်။
ကျွန်တော် သေချာ ဖတ်သွားပါတယ် ... သမီး မွေးထားတော့ ... :)
ပီပြင်တယ်။ အသိထဲမှာများ မြန်မာပြည်မှာ ပြန်ထားပြီး နည်းနည်းကြီးမှ ပြန်ဆုံတဲ့ အဖေနဲ့ သမီး ရှိနေသလားပဲ။ ကျွန်တော်အသိ တစ်ယောက်လည်း အဲဒီလိုပဲ။ဓါတ်ပုံထဲမှာ မြင်ဖူးတယ်တို့.. ဖေဖေ မသိပါဘူးတို့ ... သမီးတို့ဆီမှာတို့.. အဲဒါမျိုးတွေ ကြားနေရတယ်။
အရမ်းကို ဖတ်ကောင်းတာပဲ ... တကယ်ကို ကောင်းတာ .. အရီးပန် ... သိပ်ကြိုက်တာပဲ ...။
ပန်ဒိုရာ ဆိုတာ ဒါပဲ.....
မျိုးဆက်တဆက်ပြီးတဆက် ဖတ်ရှုသွားရမယ့် စာအုပ်တအုပ်ပါဗျာ။ Excellent ပေးသွားပါတယ် မပန်။
ကျွန်တော် နားလည်အောင် ဖတ်ခဲ့ဖူးသော ကျောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်သည် သမီး မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းမျိုးတွေ အပြင်မှာလည်း တကယ်ရှိချင် ရှိမှာဗျ နော့။ နားလည်အောင် ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်တွေကလည်း တိုးတိုးလာတယ်ဗျာ..ဟူး..။
မြေအုတ်များ ကျောက်အုတ်များနှင့် သွေးစက်နီနီ ၀တ္ထုကို ကျနော် အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ် ... ။ ကျနော့်မှာ မကြာခဏ ဆက်သွယ်နေရတဲ့ သားတယောက်အတွက် ဖခင်တယောက်ရဲ့ သောကနဲ့အလွမ်းကို ဒီဝတ္ထုလေးက ပိုပြီး ခံစားရပါတယ် ...။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...။
ရင်ထဲကနေ ခံစားပြီး ဖတ်သွားပါတယ် မပန်ရေ။ အရမ်းကောင်းတယ်လို့ ပြောချင်တာထက် ခံစားချက်တွေ ပိုများလို့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ၀တ္ထုလေးဗျာ ဖတ်ရင်းနဲ့အရှန်တောင်မသတ်နိုင်ဘူး သမီးလေးကို ကော အဖေ ကိုကော လေးစားတယ် ။ အရမ်းကောင်းတာပဲပြောတက်တော့တယ် ကျနော်ထင်တာ ဒေါ်လေး ဘာသာပြန် ပို့ စ်တင်ထားပေးတာလားလို့အခုတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးလေးကို ဂွဒ် :P ။
အမကတော့ တာဝန်ယူမှုမဟုတ်တဲ့ ဗီဇစိတ်ကို မြင်လိုက်ရတယ်လို့ထင်တယ်.. သူ့အဖေရဲ့ဗီစိတ်.. ဒါမှမဟုတ် အဖိနှိပ်ခံပြီး ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ နဂို ဗီဇစိတ်.။ အဲဒီဗီဇစိတ်တွေကို အမတို့အရွယ်တွေ.. မိဘတွေက ပံ့ပိုးပေးရမှာပါလားလို့ ဒီဝတ္ထုလေး ဖတ်အပြီးမှာ တွေးမိသွားတယ်။
...“အကြာကြီးထားခဲ့လို့ သမီးက ဖေဖေ့ကို စိတ်ဆိုးနေလား” ဟု ကျွန်တော်က မေးလိုက်သောအခါ “ဟင်.. လူများတွေ အတွက် အရေးကြီးတာတွေကို လုပ်နေတာပဲ ဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲ” ဟု မျက်လုံးကလေး လှန်ကြည့်ကာ ပြန်ဖြေပါသည်။ သမီး တကယ်ပဲ ဆိုလိုသလား။ ရွဲ့စောင်း ပြောလိုက်လေသလား။ တယောက်ယောက်က တခုခု ပြောလိုက်တိုင်းမှာ မသင်္ကာစိတ်ဖြင့် စောကြောတတ်မှုကို ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု၏ ခါးသီးမှုများက သင်ပေးခဲ့သဖြင့် အကျင့်ပါနေခဲ့ပြီ။...
ကိုယ့်တွေ့ကြုံဘူးတဲ့အတိုင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆယ်စုနှစ် ၂ခုစာကွဲကွာနေတဲ့ သားအဖ နှစ်ယောက်အတွက် တကယ်တမ်း ပြန်တွေ့ တဲ့အခါမှာ သူစိမ်းသာသာပါပဲ။ ဖအေလုပ်တဲ့သူကလဲ သူ့ ကမ္ဘာနဲ့ သူ… သမီးလုပ်တဲ့သူကလဲ သူ့ ဘ၀နဲ့ သူ ဖြစ်သွားပါပြီ။ အတူတူနေပြန်နေဖို့( မိခင် မပါဘဲ) လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပုံမှန် တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိသော မိခင်ကလည်း သူမ၏ သမီးကို ထိုကဲ့သို့အနှစ် ၂၀ကျော် ကွဲကွာနေသော ဖအေနှင့် အတူနေရန် ထည့်ပေးလိုက်မည် မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ .. အမ ရေးထားတာလေးကိုတော့ ကြိုက်တယ် … ဆက်လုပ်အမ.. အားပေးနေတယ် ..နောက်နေ့ မှ Gtalk မှာ ပြောမယ်။
အမ ကြောင့် Alligator ကိုသိသွားတဲ့သူ ;)
စာထဲမှာ မျောသွားတယ် မပန်ရေ...
ညှို့အားကောင်းတဲ့ အရေအသား နဲ့ ခံစားရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို မှော်ဆရာပန်ဒိုရာရေးဖွဲ့လိုက်တော့ တကယ်ပဲ စာထဲမှမျောသွားရပါတယ်...
အခုမှပဲ အရမ်းနံမည်ကြီးနေတဲ့ ၀တ္ထုကို လာဖတ်ရတော့တယ် :D
ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေရဲ့ ကြေကွဲစရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ….။
အကြိမ်ကြိမ် ညံ့ခဲ့လို့ ဒီနေ့မှာ ခေါင်းမော်မကြည့်နိုင်လောက်အောင်
အညံ့ခံလိုက်ရပြီးလားလို့ ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားဖူးတယ်…
ဒါပေမယ့် … အဆိုးဆုံးကို ရင်မဆိုင်ပဲနဲ့တော့ …
အကောင်းဆုံး အနာဂတ်ကို မရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်…
ကျွန်တော်တို့ ကလေးငယ်တွေကို လမ်းမပေါ်မှာ ထပ်အသေမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ဒီစနစ် ဒီခေတ်ကို ပြောင်းလဲပစ်မှ ရတော့မယ်…။
သိပ်ကောင်းတဲ့ ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ပါပဲ မပန်။ မြေအုတ်တွေ ပျက်စီးတဲ့အခါ ကျောက်အုတ်တွေနဲ့ အစားထိုးရမှာပေါ့လေ။ ကြောက်အုတ်တွေ မဖြစ်ကြဖို့ပဲ အရေးကြီးတာ မဟုတ်လား။ “အိမ်” ပြန်ရမယ့် အချိန်ကို အိမ်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ ရောက်နေသူတိုင်း မျှော်လင့်တောင့်တမိကြမှာပါ။ ဘယ်လိုပဲ ယိုင်နဲ့ပျက်စီးနေပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အဝေးက “အိမ်” ကို ပြန်ပြင်ချင်စိတ် ရှိနေဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
မကြီးပန်ရေ တအားကောင်းတာပဲဆိုတာထက်ကို ပိုမပြောတတ်တော့ဘူးဗျာ။ ဘာသာပြန်ထင်နေတာ ဖတ်လာလိုက်ရင်းနဲ့ မကြီးပန်ပင်ကိုယ်ရေးမှန်းလဲ သိလိုက်ရော တအားပျော်သွားတယ်ဗျာ။ သေသေချာချာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပီး မပြောတတ်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ရှုထောင့်စုံအောင်ကို ကောင်းလှတယ်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ :) :)
အထက်က အစ်ကိုအစ်မတွေ ပြောသွားတာနဲ့တင် ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး
ကောင်းလွန်းလို့ ရင်ထဲ ထိလွန်းလို့ ပို့စ်နဲ့ တန်မယ့် ကွန်မန့်ကို ရေးဖို့ မိနစ်အတော်ကြာကြာ စဉ်းစားခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၀တ္ထုတိုထက် ကွန်မန့်က ပိုကောင်းသွားမှာစိုးလို့ မရေးဖြစ်တော့ပါဘူး။ :P
မိုးမိုး(အင်းလျား)လို ကဝေတယောက် မွေးဖွားလိုက်လေပြီ။ ဇတ်လမ်းထဲက သားအဖဟာ ဘယ်သူတွေလည်း ဆိုတာ သိနေသလိုပဲ။ စာရေးသူ ကိုယ်တိုင် ဥရောပကို ရောက်ဖူးရင် ဇတ်လမ်းက ဒီထက်ပိုပြီး ပီပြင်မယ်။
အနီးအဝေး၊ အတက်အကျ၊ အတွေးအဆ၊ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် အဖွဲ့ နဲ focus ပြတ်ပြတ်သားသား ..၀တ္ထုတိုဆန် စွာလှပနေတဲ့ ဝတ္ထုတိုပါပဲ..
ဒီလောက်ပါ ပဲ ၊ ဆက်ရေးရရင် ဒီ ကွန် မန့် က အပေါ်က ကဒေါင်းညင်သာ ကွန်မန့် ထက်ပိုကောင်းသွားမှာစိုးတယ်…
လာရောက်အားပေးသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကွန်မန့်များအားလုံး ပို့စ်ထက် ကောင်းပါတယ် ဟဲဟဲ။
ကိုသက်ဦးပြောတာ မှန်တယ် အဲဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ရေးမယ့်သာ ရေးရသာပါ confidence သိပ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။
မပန်က တကယ့် စာရေးဆရာမပဲ။
EI CHAW said...
your story is so good that I can't stop tears from my eyes.
thanks for recognizing new generation!
but I may be something because of ur story.
ဒီ ပိုစ့် လေးကို ဖတ်ပြီး အသိတရားလေးတစ်ခု ကို
ရသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မပန်..